Dad laga qafaalay magaalada L/canood loona kaxayyey dhanka burco | maakhir.com
Dad laga qafaalay magaalada L/canood loona kaxayyey dhanka burco
October 25, 2007 in Somalia | Tags: SOOL
Dad gaaraya 45 oo ay maleeshiyooyinka taageersan Soomaaliland maanta ka afduubeen magalada Laascaanood ayaa lagu oo waramayaa in haatan la geeyey magaalada Burco.
Dadkan ayaa kamid ahaa kuwo laga qab qabtay gudaha magaalada Laascaanood, halkaasi oo maalmihii lasoo dhaafay oo dhan uu ka socday kacdoon shacab oo looga soo horjeedo maamulka Somaliland.
Ciidamada Soomaaliland ee saldhigoodu yahay banaanka waqooyi ee kontaroolka Laascaanood ayaa maanta isku dayey in ay gudaha usoo galaan magaalada Laascaanood, taasi oo keentay iska horimaad dhagax tuur ah iyo mid hubeysan oo ay shacabka kala hortageen raxan kamid ah ciidamada Soomaaliland.
Arrintan ayaa keentay in ay dhintaan labo kamid ah ciidamada Soomaaliland oo midi xabad lala haleelay halka kan kalena uu ka dhacay gaarigii uu saarnaa.
Midka xabada lagu dhuftay ayaa la sheegay in askarigaasi uu isku dayey inuu dejiyo Calanka Soomaaliya oo surnaa guri ku yaal wadada laamiga dhinaceeda, arrintaasi oo keentay in qof shacab ah toogto asagoo dajinaya calanka buluuga ee astaanta Soomaaliya. Waxaana halkaasi iska horimaad hubeysan ku dhexmaray dhalinyarada magaalada iyo ciidankii saarnaa gaariga tiknikada ah ee uu askarigaasi la dilay la socday.
Ciidamadaasi ayaa dib uga gurtay goobta uu iska horimaadka ka dhacay kadib markii ay kusoo qamaameen dad badan oo careysan.
Dhinaca kale maleeshiyooyinka ku sugan gudaha magaalada iyo Ciidamada Soomaaliland oo iskaashanaya ayaa magaalada ka qafaalay dad isugu jira rag, haween iyo dhalinyaro.
Dadkan oo lagu qiyaasayo 45 ayaa hada wararka soo baxaya ay sheegayaan in qaar kamid ah la geeyey magaalada Burco, halkaasi oo horey loogu xiray tiro kamid ah ciidamada Puntland oo ay gacanta ku dhigeen maleeshiyooyinka taageersan Soomaaliland.
Dadkan loo dhaadhiciyey xabsiga Burco ayaa waxaa ku jira qaar kamid ah raga ganacsatada magaalada kamid ah.
Xaalada magaalada Laascaanood ayaa kacsan ayadoo ay shacabku weli wadaan banaabaxyo ay wadooyinka dhagaxaanta ku dhigayaan isla markaana si weyn uga hortagayaan in ay jidadka magaalada maraan xubnaha Somaliland usoo dirsatay Laascaanood iyo waliba ciidamada iyo maleeshiyooyinkoodaba.
Falkan maanta ayaa kusoo beegmay 24 kadib markii Baaq nabad ah ay soo saareen Issimada Puntland oo ugu baaqay ciidamada Somaliland in ay si nabad ah isaga baxaan magaalada Laascaano, hadii ay taasi dhici weydana cawaaqib xumo lagala kulmayo.
Hase yeeshee maamulka Soomaaliland ayaa hada xooga saaraya inuu si awood ciidan ah ugu caburin lahaa shacabka magaalada gadoodka ka wadan kuwaasi oo gebi ahaanba kala xiray magaalada isla markaana xanibay xubnihii maamulka Somaliland u magacaabay Laascaanood oo loo diiday in ay magaalada gacanta ku dhigaan.
« Abaabul Milateri oo ka socda Sool iyo ciidamo Kasoo jeeda Maakhir oo aan wax lug ah ku lahayn
Madaxweynaha Maamul Goboleedka Maakhir ee Soomaaliyeed oo Gaadhey Magaalada Dhahar »